FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WOLFDOG CZECHOSLOVAKIA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Wolfdog Czechoslovakia
Raksha ilay Wolfdog Czechoslovakian vavy malemilemy
Alika vaovao ity, izay tsy afaka mirehareha fomban-drazana an-jatony taona maro, na ny anaran'ny mpitondra malaza na olom-banona nanangana azy na nanana azy. Na izany aza, mahasarika ny sainy amin'izay misy azy io. Tsy misy olona misalasala, na dia vetivety fotsiny aza, fa ireo alika ireo no fiaviana niavaka indrindra. Ny natiora dia ny Natiora. Toa amboadia ilay izy. Avo izy nefa maivana sy mahery. Ny volony mahitsy sy matevina dia volondavenona toy ny amboadia miaraka amin'ny sarontava fotsy mahazatra. Izy io dia hampitombo anao amin'ny fahatokiana, miaraka amin'ny masony maivana, hapetraka tsara. Tsy mijery ny tompony fantany tsara, isaky ny fotoana, aiza ny tompony sy ny zavatra ataony. Mandinika tsara ny manodidina azy izy, fa te hanana fomba fijery tsara. Afaka mihazakazaka 100 kilaometatra (100 kilometatra) mora foana izy io, manana fahatsapana fitarihana lehibe ary mamaly amin'ny hafainganam-pandeha. Tsy misy làlana sarotra loatra hanarahana azy. Tsy maninona na avy ny orana na ny hatsiaka na ny andro na ny alina. Tsy misy zavatra tsy tantiny raha tiany izany. Isan-taona dia tonga ireo alika kely avy amin'ny firenena renim-pianakaviana roa - ny Repoblika Czech sy ny Repoblika Slovak. Ny fiompiana voalohany dia voarakitra any Austria, Slovenia ary Hongria biby dia nafarana tany amin'ny firenena maromaro. Ny alika dia aseho isan-taona amin'ny seho alika sy fampiratiana.
Samy mampatsiahy amboadia na ny volony na ny volon'ny Wolfdog Czechoslovak. Ny haavon'ny dewlap ambany indrindra dia 26 santimetatra (65 cm) ho an'ny lahy ary 60 cm (60 sm) ho an'ny vehivavy dia tsy misy fetra amboniny. Ny vatan'ny vatana dia refy mahitsizoro ny halavany sy ny halavany dia 9:10 na latsaka. Ny fanehoana ny loha dia tsy maintsy manondro ny firaisana. Ny maso amber dia mivelatra amin'ny tendrony fohy sy fohy ary mahitsy amin'ny endrika telozoro no mampiavaka azy. Ny setrin'ny nify dia feno (42) azo ekena fa ny hety dia miendrika hety na miendrika plier amin'ny nify. Mahitsy ny hazondamosina, mahery mihetsika, misy valahana fohy. Ny tratra dia lehibe, fisaka kokoa noho ny endrika barika. Mahery ny kibony ary voasintona ao. Fohy ny lamosina, somary misavoana ny rambony dia avo be rehefa ampidinina malalaka dia mahatratra ireo tadidy. Ny forelimbs dia mahitsy sy tery napetraka, miaraka amin'ny tongony somary nivadika, miaraka amin'ny lava boribory sy metacarpus. Ny rantsambatana dia hozatra miaraka amina zanak'omby lava sy instep. Ny lokon'ny volo dia avy amin'ny mavo-volondavenona ka hatramin'ny volondavenona, miaraka amin'ny sarontava maivana. Ny volo dia mahitsy, akaiky ary matevina be. Ny Czechoslovak Wolfdog dia canterer mampiavaka azy ary maivana sy mirindra ny fihetsiny, lava ny diany.
Ny Wolfdog Czechoslovak dia velona, ​​mavitrika tokoa, afaka miaritra, mahazaka fanehoan-kevitra haingana. Tsy matahotra izy, be herim-po, mampiahiahy, nefa tsy manafika tsy misy antony. Mampiseho fahatokiana lehibe amin'ny tompony izy. Mifanohitra amin'ny toetr'andro. Betsaka amin'ny fampiasany. Milalao be ny Wolfdog Czechoslovakia. TSY fitarihana mety Mety ho Moody . Mora mianatra izany. Afaka mankafy ireo toetrany manodidina azy rehetra isika fa tsy ny mampiavaka azy. Na izany aza, tsy tokony hanantena isika fa tokony hisy izany mampiofana ho azy ny fitondran-tenan'ny CsV dia misy zava-kendrena tanteraka - ilaina ny mitady antony manosika ho amin'ny fiofanana. Ny antony matetika mahatonga ny tsy fahombiazana dia matetika ny ny olona tsy dia matanjaka toa ny amboa , tsy misy mpitarika ary / na reraka ny alika noho ny famerimberenana maharitra, tsy misy ilana azy fanatanjahan-tena mitovy, izay miteraka fahaverezan'ny antony manosika. Ireo alika ireo dia manana fahatsapana mahavariana ary tena mahay manara-dia ny làlambe. Tena mahaleo tena izy ireo ary afaka miara-miasa ao anaty fonosana miaraka amina tanjona kendrena manokana. Raha ilaina dia afaka mamindra mora foana ny asany amin'ny ora alina izy ireo. Ny asa mahaleo tena fonosana nefa tsy voafehin'ny lehilahy iray no antony nampiasan'izy ireo tao amin'ny tafika. Indraindray ny olana dia mety hitranga mandritra ny fiofanan'izy ireo rehefa ilaina ny mivovo. Ny Wolfdogs Czechoslovakian dia manana fomba bebe kokoa hanehoany ny heviny ary amin'ny toe-javatra sasany dia tsy voajanahary amin'izy ireo ny fitezahana. mifandray amin'ny tompony amin'ny fomba hafa. Amin'ny ankapobeny, ny mampianatra ny CsVs fampisehoana marin-toerana sy azo itokisana dia mitaky fotoana bebe kokoa noho ny mampianatra karazam-borona mahazatra. Ny Wolfdog Czechoslovakia dia mety ho somary mahery setra raha tsy ny olombelona maneho ny fahefana sahaza . Amin'ny ankapobeny dia tsy atokisana amin'ny biby hafa. Tsara amin'ny ankizy matetika izy io, saingy mampiahiahy sy mailo amin'ny olon-tsy fantatra.
Haavony: Lahy farafaharatsiny 26 santimetatra (65 cm) Vehivavy, fara fahakeliny, 24 santimetatra (60 cm)
Milanja: Lahy farafaharatsiny 54 kilao (26 kg) Vehivavy farafaharatsiny 44 pounds (20 kg)
Amin'ny ankapobeny dia karazany salama sy matanjaka. Mora voan'ny dysplasia.
Tsy maninona ny CzW ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Izy io dia mavitrika mavitrika ao an-trano ary hahomby amin'ny tokotany lehibe. Mety tsara amin'ny toetrandro mangatsiaka.
Ity karazana ity dia mila fanatanjahan-tena isan'andro sy toerana sahaza. Mila raisina isan'andro, lava, mandeha haingana toerana anaovan'ny alika voditongotra eo anilany na ao ambadiky ny olombelona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary io mpitarika io dia tokony ho ny olombelona.
Ny alika sy amboadia miteraka niteraka fotoana lava be - velona 12-16 taona eo ho eo ny amboadia.
Ity karazana ity dia mihena be in-droa isan-taona. Ilaina indrindra ny fandroana, satria mora manapoka loto ny palitao. Shampooo maina indraindray. Madio sy tsy misy fofona ity alika ity.
Tamin'ny taona 1955 dia nisy andrana biolojika niseho teto Tsekoslovakia. Ny fiampitana a Alika mpiandry alemanina miaraka amina amboadia Carpathian. Ny mpamorona ny karazany dia Czech, Andriamatoa Hartl, arahin'ny Slovakia, Andriamatoa Rosik. Rehefa nisaraka roa i Tsekoslovakia: ny Repoblika Tseky sy Slowakia no nahazo ny mpiaro. Ny CWD dia iray amin'ireo karazana slovakian nasionaly. Ny andrana dia nametraka fa ny fiterahana alika lahy amin'ny amboadia vavy ary koa ny amboadia lahy amin'ny alika vavy dia azobeazina. Ny ankamaroan'ny vokatra amam-panambadiana ireo dia manana ny fitakiana genetika hanohizana ny fiompiana. Tamin'ny taona 1965, taorian'ny fiafaran'ny andrana dia notanterahina ny drafitra ho amin'ny fananahana ity karazany vaovao ity. Izany dia ny fampifangaroana ireo kalitaon'ny amboadia azo ampiasaina sy ny kalitaon'ny alika. Tamin'ny taona 1982, ny Wolfdog Czechoslovakiana dia nekena ho toy ny firenena.
Jolly z Molu Es., Sary natolotr'i Kennel z Peronówki
Jolly z Molu Es, sary natolotr'i Kennel 'z Peronówki
Nancy Šedá Eminence, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Club of the peters (sy namana) an'ny Czechoslovakian Wolfdog
Hijery ohatra hafa momba ny Wolfdog Czechoslovakian
Wolfdog Czechoslovakian sary 1
Misaotra an'i Margo Peron tamin'ny fanampiana ny Dog Breed Info amin'ity vaovao ity. Kennel 'z Peronówk
alika omby aostraliana miloko manga
alika kely havanese volo amidy
omby volontany sy fotsy
chihuahua afangaro amin'ny sary terrier